Soo dejisan Bitdefender Antivirus Free 1.0.17.169 – Vessoft
WindowsAmnigaAntivirusesBitdefender Antivirus Free
Bogga rasmiga ah: Bitdefender Antivirus Free
Bitdefender Antivirus Free – software ah oo leh habab badbaado oo wax ku ool ah si looga hortago in fayruska laga qaado infekshinkaaga. Software wuxuu isticmaalaa saxiixyo farsamo iyo tiknoolajiyada habdhaqanka si loo ogaado loona xakameeyo hawlaha shakiga leh, nacabka iyo hindhistaha, trojans, rootkits, iyo hanjabaado kale oo sare. Bitdefender Antivirus Bilaash waxay damaanad qaadaysaa ilaalinta khatarta cusub iyo kuwa aan la aqoon ee ay ugu wacan tahay farsamooyinka daruurta. Software wuxuu isku daraa noocyo kala duwan oo baaritaan lagu sameeyo oo keliya hal qalab baaritaan oo gacanta lagu sameeyo oo si taxadar leh u hubiya nidaamka waxqabadka halista ah. Bitdefender Antivirus Bilaash waxay ku xiran tahay nidaam si aad uga ilaaliso kumbiyuutarkaaga khayaanada internetka, kaas oo xannibaya isku dayyada shabakadaha been abuurka ah si ay u qabtaan xogta qarsoodiga ah ee user. Software ayaa raacaya siyaasadda minimalism, sidaa daraadeed waxay leedahay naqshad fudud oo fudud oo leh astaamaha ugu muhiimsan.
Nidaamka loo yaqaan hanjabaadaha khatarta ah
Ka ilaalinta weerarada internetka
Xakamaynta nacabka iyo nidaamka qarsoon
Ilaalinta khayaanada internetka
Hubinta faylka caqliga
Soo dejisan Bitdefender Antivirus Free
Faallo ku saabsan Bitdefender Antivirus Free
Bitdefender Antivirus Free Xirfadaha la xiriira